5 maapplication uye tweaks ayo anoshandisa 3d kubata pane iphone 6s munzira dzakasiyana
Kuru Nhau & Ongororo 5 maapplication uye tweaks anoshandisa 3D Kubata pane iyo iPhone 6s munzira dzakasiyana
Apple & apos; s itsva yekumanikidza-inonzwisisika tekinoroji tekinoroji iyo yakaita kuuya neiyo iPhone 6s uye 6s Plus inonyatsonzi 3D Touch. Kusiyana neiyo Kumanikidza Kubata tech paApple Watch, iyo 3D Bata chinovhara mashandiro yePhones nyowani inogona kusiyanisa pakati pemagetsi, epakati, uye akaomarara matepi, zvichibvumira nzira dzekutsvaga dzekubatana nemaapps ako nemitambo. Iyo inonzi Peek sarudzo iyo inogona kuongorora maemail mubhokisi rako rekushandisa, semuenzaniso, inoda kubata kwepakati, nepo kudzvanya zvakanyanya iri sarudzo yakanzi Pop, uye ichavhura iwo meseji pachawo.
Iyo yekuwedzera dura rema capacitive sensors inotora mamiriseconds kuyera mineti shanduko iri chinhambwe pakati pevhavha yegirazi uye backlight, uyezve iOS inopindura zvinoenderana nekumanikidza kunoiswa. Pane chimwezve chinhu chakawedzerwa kune yakajairwa skrini-yekuwedzera-yekuvhara-girazi kumisikidza, uye iri taptic injini inopindura kumadhindaini ako neakavanzika mhinduro, saka iwe unoziva iwe urikuita chimwe chinhu nemadhindaini ako.
Isu takatokomberedza mamwe anofanirwa-kunge aine maapps anga ave yakagadziridzwa kune nyowani 3D Kubata chaiko , asi tekinoroji iyi iri nyowani, zvekuti vagadziri vauya nedzimwe nzira dzakasarudzika dzekushandisa mukana wekumanikidza-inonzwika iPhone 6s kuratidza, tarisa kunze.
5 akasiyana maapplication uye tweaks anoshandisa 3D Kubata pane iyo iPhone 6s / Plus
iphone 11 pro max kuchaja chiteshi
nhema chishanu apple wachi inobata
Iyo mbozha Spotify app inogona kukurumidza kutamba raibhurari yako yese yemumhanzi, kusanganisira nziyo dzemuno
Android 7.0 Nougat inogadziridza ikozvino kubuda kune iyo Motorola Moto G4 uye Moto G4 Plus
Maitiro ekubatanidza mutyairi we PlayStation 3 kune Sony Xperia Z2 (kana chero inoenderana Xperia smartphone)
Fitbit Ionic vs Apple Watch vs Samsung Gear S3: maficha uye specs kuenzanisa
Gatling - Maitiro Ekutumira Post Chikumbiro muStringBody () NeRandom Dhata
Chinja yako Android kuita iPhone X neaya ekutanga, ma icon, uye maapp
Microsoft Office yeIpad inozowana Split View multitasking muIzwi uye PowerPoint